သန့်ရှင်း & သွားဖုံး
သက်သာစေသည် & ကျန်းမာသောသွားတိုက်ဆေးကိုဂရုစိုက်ပါ
သက်သာစေသည် & ရယ်စရာကလေးများသွားတိုက်ဆေးကိုဂရုစိုက်ပါ
သက်သာစေသည် & Macaroon သွားတိုက်ဆေးကိုဂရုစိုက်ပါ
သက်သာစေသည် & Amino Acid ကိုဂရုစိုက်ပါ & မီးသွေးသွားတိုက်ဆေး
Domy ဓာတု Co. , Ltd
ရုံး: အမှတ် ၁၈၀, Xinyong လမ်း,Xiaolan မြို့, Zhongshan.
စက်ရုံ: Yihui 2nd Road,Maohui စက်မှုဇုန်, Henglan မြို့, Zhongshan.
ပစ္စည်း: သက်သာစေသည်&care Enzyme Charcoal Spray Specification Mints Net weight: 8ml Flavor: Mints Exp. ရက်စွဲ:3years Executive standard: GB/T 8372 qualified Direction: Spray this product directly on the oral cavity to keep your breath fresh, spray 1-2 times each time. Place of origin : Guangdong Packaging & Delivery: Carton:…
သွားတိုက်ဆေးသည်သွားတိုက်ဆေးကိုအစားထိုးပေးနိုင်သည်? mousse mouthewash သုံးခြင်း၏မှန်ကန်သောနည်းလမ်းကားအဘယ်နည်း?
အိမ်များ(Zhongshan)ဓာတု Co. , Ltd © 2020 မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး သင်္ဘောပေါ်လစီပြန်လည်ပေးပို့ခြင်းဆိုင်ရာမူဝါဒကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ